Ukusetshenziswa kwe-membrane bioreactor esibhedlela ukwelashwa kwendle-Imboni izindaba-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ukusetshenziswa kwe-membrane bioreactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela
Isikhathi: 2020-04-16 Hits: 39
1. Umgomo wokusebenza we-membrane bioreactor
Inqubo ye-membrane bioreactor ikakhulukazi isho ubuchwepheshe bokwelashwa kwamanzi amdaka ngokuhlanganiswa kwe-biotechnology nobuchwepheshe bokuhlukanisa ulwelwesi. Phakathi kwazo, imishini yokuhlukanisa ulwelwesi ingavimba izinto ezi-macromolecular organic futhi isebenze i-sludge ethangini lokuphendula le-biochemical, futhi ilondoloze ithangi lokulinganisa lesibili, ukuze kwandiswe ukwanda kwe-sludge okusebenzayo, nesikhathi sokuhlala se-sludge nesikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic ingalawulwa Futhi, izinto ezinzima kakhulu ku-reactionor zizonciphisa futhi zisabele. Ngakho-ke, uma kuqhathaniswa nendlela yendabuko yokwelashwa okujwayelekile, ubuchwepheshe bokuhlukanisa ulwelwesi olusetshenzisiwe enkambisweni ye-membrane bioreactor bungawuqinisa umsebenzi we-bioreactor, ongomunye wobuchwepheshe obusha nobusetshenziswa kabanzi ekwelapheni kwamanzi amdaka.
2. Ukuhlaziywa kwesicelo se-MBR ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela
2.1 Ukusebenziseka kokusetshenziswa kwe-membrane bioreactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela
Ngokusho kocwaningo olwenziwa ochwepheshe abaningi kanye nabafundile, ama-membrane bioreactors angadicilela phansi izinto eziphilayo emgodini wokukhuculula indle futhi angasebenzi ama-pathogenic microorganisms, bese ehlunga izinto ezingamanzi ezinamanzi ezinamanzi ezinamanzi ezinamanzi amancane kanye nezinto ezimisiwe nge-membrane, ukuze ukungcola okungcolile kungalawulwa ngaphansi kwe-0.2NTU. Izinzuzo zalo zibonakaliswa kakhulu ekunciphiseni kokukhipha i-aerosol kanye nesizukulwane se-sludge, ukusetshenziswa okulandelayo kwe-disinitness unit disinfectant kuncishisiwe, futhi into emisiwe emanzini nayo izoncishiswa, ngakho-ke izobamba iqhaza elibalulekile ekwelashweni kwendle okwenziwa esibhedlela.
2.2 Umphumela wokusebenza kwe-membrane bioreactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela
Ukusetshenziswa kwe-membrane bioreactor kungasusa ngaphezu kwe-90% ye-ammonia nitrogen emanzini, futhi kunezinzuzo ezinhle ekuphikisweni komthwalo wethonya. Ngokuvamile, lapho izimo zokusebenza ziba nzima ngokwengeziwe, i-MBR ikhombisa amandla amakhulu okususa into esebenzayo kunendlela ye-sludge esetshenzisiwe, futhi ikhwalithi esebenza kahle ilungile futhi iqinile, ukuze isikhathi se-sludge nesikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic sehlukaniswe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sokuhlunga kwe-sludge elixubekile le-ketshezi, usayizi we-pore we-membrane uyancishiswa ngenxa yokwakheka kwesendlalelo sesigaba se-biological phase sediment ngaphansi kwesenzo sobuso be-membrane.Ukusetshenziswa kwenqubo ye-MBR kungabamba ngokuphumelelayo ama-pathogenic microorganisms, ngakho-ke sizinzile ekususeni amagciwane. Iphinde yenzele ukushiyeka kwenqubo yendabuko yokugomela ama-chlorination.
Ngokuya kokungathatheli okulandelayo, uma kuqhathaniswa nenqubo eyenziwe nge-sludge, inqubo ye-MBR nayo ingagcina ama-disinfectants amaningi, futhi inhloso yokufaka kungabonakali ingafinyelelwa esikhathini esifushane sokuxhumana, ngakho-ke ukuncishiswa kokutshalwa kwezimali kanye nemishini yokuthwala Indawo yokumboza futhi ukunciphisa izindleko ezihambisana nenqubo yokubulala amagciwane kubaluleke kakhulu. Ngokubhekela ekunciphiseni izingozi zemikhiqizo yokuhlaselwa magciwane, i-MBR ingaqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kwama-hydrocarbon aqhakazile kuyancishiswa. Uma i-chlorine eyinsa emanzini isiphelile, okuqukethwe ama-hydrocarbon aqhakazile ngeke kusashintsha.
Ngaphezu kwalokho, ukuqoqwa kwama-hydrocarbons aqhakazile, i-monobromodichloromethane, i-chloroform, njll. Kuzoncishiswa, okuzobe kunciphisa ukulimala okungapheli nokungaba khona emvelweni nasempilweni yomuntu. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwenqubo ye-MBR ngeke kwehlise inani lesibulala magciwane kuphela, kepha futhi kunganciphisa umthelela wokungatheleleki kwemikhiqizo ngemikhiqizo yezempilo yabantu kanye nemvelo yezemvelo, futhi kungasetshenziswa ngokuphelele ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela.
Okwedlule: Inqubo nenqubo entsha ye-membrane bioreactor MBR
Okulandelayo: Umqondo we-biofilm-membrane bioreactor